कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा हेडफोन जडान गर्न? तपाईं एक आधुनिक मानिस छन्, र नै समय पनि एउटा संगीत प्रेमी (वा cinephile) मा, कम से कम जीवनमा एकपटक तपाईंले छन् (वा निकट भविष्यमा हुनेछ) यदि यो प्रश्न।
सुरुमा यो तपाईंको कम्प्युटरमा हेडफोन जडान रूपमा यस्तो देखिने प्राथमिक कार्य केही जटिल र अबोध्य छ कि जस्तो लाग्न सक्छ। यो एक भ्रम छ!
कृपया याद गर्नुहोस् कि यो अडियो उपकरण को सबै भन्दा पछाडि वा अगाडि प्यानल त जोडिएको छ, तर पनि त्यहाँ पनि धेरै लोकप्रिय वायरलेस मोडेल छ।
1 कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा हेडफोन जडान गर्न। पछिल्लो प्यानल
1 स्थिति प्रयास गर्नुहोस् प्रणाली एकाइ यो अक्सर हुन्छ, र नेत्रहीन रूपमा, ताकि जडान प्रक्रिया स्पर्श नियन्त्रण छैन। सम्झना हो कि आदर्श जडान तपाईं आवश्यकता See कसरी स्थान को गुँड, र आफ्नो रंग-कोडित। एउटै समयमा कम्प्युटरमा बायाँ गर्न सकिन्छ।
2. उपयुक्त स्लट मा निर्णय। त्यहाँ जाल पानी पत्थर गर्न सक्छन्। आफ्नो हेडफोन प्लग साँघुरो छ भने, त्यसपछि सबै तपाईं के गर्न आवश्यक छ - यो अनुरूप कनेक्टर हल्का हरियो रंग पाउन सजिलो छ। तर तपाईं उदाहरण 3.5 मिमि लागि, सुसज्जित ठूलो व्यास को एक प्लग संग audiogarnituru खरिद गर्नुभएको छ भने, अहिले सम्म युग्मक खरिद गर्न छ। यो पनि मूल हेडफोन, प्लग USB संग सुसज्जित यो मामला मा, तपाईं बस पछिल्लो प्यानल (तिनीहरूले बराबर हो) मा कुनै पनि निःशुल्क स्लट मा प्लग छ छन् हुन्छ। कसरी आफ्नो हेडफोन जडान गर्न आफ्नो कम्प्युटर आफ्नो फोनबाट? तपाईं यसलाई के गर्न सक्नुहुन्न भने पनि, एक विशेष एडप्टर किन्न हुनेछ।
3. तपाईं हेडसेट जडान गर्नु भन्दा पहिले आफ्नो हाल चलान भने, यो डाउनलोड गर्नुहोस्। भने, जस्तै लामो रूपमा यो नयाँ उपकरण पत्ता लगाउन गर्दैन केही सेकेन्ड पर्खनुहोस्। तयार हुनुहुन्छ? वास्तवमा, प्रायजसो, तपाईं थप केही आवश्यकता हो। हेडफोन प्रयोग गर्न तयार छन्।
2. आफ्नो कम्प्युटरमा म कसरी हेडफोन जडान गर्छन्। अगाडि प्यानल
अब कनेक्टरों पाउन सकिन्छ हामीलाई परिचित पछाडि, तर पनि अगाडि र पनि किबोर्डमा मात्र छैन। किन? यो केवल सधैं केबल लम्बाइ तपाईं खुलेर र तनाव बिना तपाईँको प्रणाली एकाइ को पछाडि यसलाई जडान गर्न अनुमति दिन्छ छ, सामान्यतया भुइँमा खडा छ।
1 तपाईं अक्सर यस्तो अवस्थामा सामना गर्न सक्नुहुन्छ: एक खरिद कम्प्युटर सबै आवश्यक अडियो उपकरण अगाडि प्यानल स्थित connectors छ, तर गर्न निशान ध्वनि कार्ड जोडिएको छ छैन। म यो कसरी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ? आफ्नो कम्प्युटर मा बारी र सञ्चालन प्रणालीको लोड लागि प्रतीक्षा, आफ्नो रुचि को कुनै पनि अडियो प्लेयर चलाउन, अगाडि प्यानल हरियो पोर्टमा हेडफोन को प्लग घुसाउनुहोस्। अडियो उपकरण छ, ठीक यो जडान, तपाईं ध्वनि यसलाई बाहिर आउँदै पहिले नै, र वक्ता बाट सुन्न हुनेछ घटनाको कामदारको हुन मानिन्छ।
2. यदि यो त भयो कि भित्री पाश छ अझै पनि साबित हुन unconnected, तपाईंले प्रयास समाधान यो समस्या मा आफ्नै। यो अन्त गर्न, विशेषज्ञहरु प्रणाली एकाइ को पछाडि उहाँलाई खोल्न सुझाव। भित्र, तपाईं निश्चित कनेक्टरों प्रकार ज्याक 3,5 संग दुई तार देख्नेछन्। तिनीहरूलाई को एक वक्ता वा हेडफोन (हरियो) र माइक्रोफोन (गुलाबी) को लागि एक लागि डिजाइन गरिएको छ। बस आवश्यक कनेक्टरों जडान गर्नुहोस्।
3. भने ध्वनि आफ्नो कम्प्युटर को अगाडि अझै पनि आउनु भएको छ, यो संभावना तपाईं जहाँ तपाईं उत्पादन खरिद सेवा केन्द्र वा कम्प्युटर पसलमा सम्पर्क गर्न आवश्यक हुनेछ छ।
3. कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा हेडफोन जडान गर्न। वायरलेस जडान
सबै को 1 पहिलो, किरा मा खरिद उपकरण विशेष एडप्टर समावेश निश्चित गर्नुहोस्। यो बिना, तपाईंले आफ्नो हेडफोन प्लग इन गर्न सक्षम हुने छैन।
द सम्बन्धित 2. तपाईँको कम्प्युटरमा कनेक्टर , यो नै एडप्टर जडान गर्नुहोस्। सामान्यतया, ड्राइभर स्वचालित रूपमा लोड छ, र केहि सेकेन्ड पछि एउटा सन्देश फेला र नयाँ उपकरणको लागि तयार कि मनिटर मा देखिन्छ।
3. भएको हेडफोन आवास ब्याट्री स्थापना गर्न भूल छैन। अडियो उपकरण स्विच छ भने, यसलाई सक्रिय। तपाईँको यन्त्र प्रयोगको लागि तयार छ!
कम्प्युटर किबोर्ड प्रमुख जिम्मेवारी विवरण। अंग्रेजी कम्प्युटर किबोर्ड
A4Tech - साँचो खेलाडीहरूको लागि माउस। अवलोकन माउस A4Tech
सबैभन्दा ठूलो व्हाल सुरक्षा चाहिन्छ
कोठरी - को बसाइ सहज बनाउन भनेर उपकरण
CNS - यो के हो? केन्द्रीय स्नायु प्रणाली: विभागको कार्य,
चुम्बन प्रविधी: अंक को रोमान्स
गिल्बर्ट ग्रीनफील्ड। रचनात्मक लेखक